配资平台推荐-迪莱奥普-省单位股票配资 Somali - BBC News Somali
War degdeg ah: Raiisul wasaarihii dalka Ivory Coast oo geeriyooday
TOOS Kenya oo Aamina Maxamed usoo xulatay inay u tartanto xil muhiim ka ah dunida
期货配资股指期货配资Taiwan waxaa loo aqoonsan yahay in ay tahay gobol ka tiran Shiinaha, balse waxay dowladdooda u shaqeysaa sida mid madaxbannaan.
Sidee ’dawada cudurka Corona’ loogu kala iibsanayaa suuqa-madow?
Sidey dhaqaalaha ku heleen haween dunida ugu taajirsan?
Walaac horleh oo kasoo kordhay feyraska corona
Muuqaal, Ilhaan Cumar: "Waa in magdhow la siiyo" dadka uu Mareykanka ku dilay Soomaaliya, 1,49
Ilhaan Cumar ayaa sheegtay in magdhow la siinayo dadka ay dhibaatada ka soo gartay duqeynta Mareykanka ee Soomaaliya uu ka fuliyo.
Muuqaal, Gabadh Soomaali ah oo koob shaah oo ay ka dalbatay maqaaxi loogu qoray kalmada ISIS, 2,07
期货配资股指期货配资Gabadh Soomaali ah oo koob shaah oo ay ka dalbatay maqaaxi ku taala Mareykanka oo loogu qoray kalmada ISIS.
期货配资股指期货配资Saynab faarax oo ku nool Australia ayaa BBC uga sheekeysay sida ay sannad kasa u xusto maalmaha xoriyadda in kastoo weligeed aysan Soomaaliya tagin.
期货配资股指期货配资Faalooyin ku saabsan Soomaaliya oo lixdan jirsatay
Ciyaaryahankii madoobaa ee midabkiisa awgii looga reebay xulka qaranka
期货配资股指期货配资Jack Leslie ayaa midabkiisa awgii loogu diidday inuu u safto xulka England.
4 Luulyo 2020
期货配资股指期货配资Tabobaraha Manchester City, Pep Guardiola, ayaa sheegay in ciyaartoyga kooxdiisu salaan sharafeed ku siin doonaan garoonka Etihad Stadium maalinta Khamiista ah naadiga Liverpool ee ku guulaystay horyaalka Ingiriiska.
期货配资股指期货配资Kooxda Liverpool ayaa cambaaraysay hab-dhaqanka qaar ka mid ah taageerayaasheeda oo iskugu soo baxay badhtamaha magaalada markii kooxdu ku guulaysatay horyaalka Ingiriiska, waxaanay kooxdu falalka taageerayaashaa ku tilmaantay "wax aan la qaadan karin".
期货配资股指期货配资Ka dib geeridii uu ku dhex dhintay saldhig boolis oo ku yaal magaalada Minneapolis ninka Marakanka Madow ahaa ee George Flyod, ayaa ciyaartoyga kooxda Liverpool badhtamaha garoonkooda Anfield ku soo bandhigeen sawir fariin taageero ah oo ay gudbinayaan.
期货配资股指期货配资Kabtanka kooxda kubadda cagta ee Watford, Troy Deeney ayaa sheegay in dad lasoo xiriiray ay u sheegeen inay jeclaan lahaayeen in cunuggiisa yar uu ku dhaco coronavirus kaddib markii uu go'aansaday inuusan ku laabannin tababarka.
期货配资股指期货配资Weeraryahanka kooxda Tottenham Son Heung-min ayaa soo gabagabeeyey tababar saddex todobaad oo qasab ah oo qayb ka ah shaqada ciidanka Kuuriyada Koonfureed,
期货配资股指期货配资Cudurka Corona: Tixraaca wararka Covid-19 ee Afrika
期货配资股指期货配资Waxaan dhinacyo kala duwan ka eegeynaa sida ay dalalka ula tacaalayaan hoos u dhaca dhaqaale ee ka dhashay xayiraadaha uu sababay Corona Fayras.
Dunida Iyo Maanta, 16:59, 8 Luulyo 2020
Idaacadda Duhurnimo, 13:59, 8 Luulyo 2020
Idaacadda Subaxnimo, 07:00, 8 Luulyo 2020
期货配资股指期货配资Barnaamijka aroornimo ee soo bandhiga wararka gogoldhaca u ah maalinta iyo cayaaraha.
Xiga Idaacadda Subaxnimo, 07:00, 9 Luulyo 2020
期货配资股指期货配资Sawirka ilma yar oo ku dul oynaya meydka awoowgii ayaa qabsaday baraha bulshada
期货配资股指期货配资Xanuunkan ayaa dhawaan lagu arkay xayawaanka doofaarka, waxayna seynisyahannada ka digayaan inuu dunida ku faafo.
期货配资股指期货配资Khudbadda Xaliimo Yarey ayaa si weyn looga dhursugayay.
期货配资股指期货配资La soco wararkii ugu dambeeyay ee caalamka iyo Soomaalida.
© 2020 BBC. BBC masuul kama ahan macluumadka bogagga kale ee dibadda.